RATSHI TERRIER IMBWA INOBEREKA RUZIVO NEMIFANANIDZO - IMBWA
Ratshi Terrier Imbwa Inobereka Ruzivo neMifananidzo
American Rat Terrier / Shih Tzu Yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
'Uyu ndiJax uye iye ari Ratshi Terrier. Ndakamutenga aine 3 months. Ane makore angangoita matatu mumufananidzo uyu. Imbwa yakangwara uye inoziva hunyengeri hwakawanda. Akanga akati omei kuita inopinda mumba , asi zvinoita mushe manje. Anogona kunge ari nesimba sezvaunoda iye kuti ave kana kuti acharara zuva rose kana ukamurega. Anonyatsoita chero zvandiri kuita. Ndatora mufananidzo uyu asati aenda kunogeza kunotora bvudzi rake nekumwe kushambidzika. '
Ratshi Terrier haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Rat Terrier uye iyo Shih Tzu . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Squishy the Ratshi Terrier pazera remwedzi misere— 'Ane simba chaizvo uye anoda kutamba. Amai vake Rat Terrier uye baba vake ndiShih Tzu. '
Squishy iyo Ratshi Terrier pamwedzi gumi nemana (Rat Terrier / Shih Tzu musanganiswa)
'Uyu ndiJuju, mukadzi Rat Terrier / Shih Tzu musanganiswa. Aive nemakore angangoita mana ekuberekwa mumafoto uye anorema angangoita gumi lbs. Ndakamuwana kubva kuchitoro chepasi-pane-chinokudzwa chemuno chitoro chandakafamba ndichipinda. Ndiye ega mbwanana kubva pane zvandinofungidzira kuti yaive marara netsaona (izwi rekuti ' dhizaina imbwa 'ndakanga ndisati ndambogadzira izvozvi, kune ruzivo rwangu) uye ini ndaisakwanisa kusiya iwo anonzwisa tsitsi maziso kumashure! Izvo zvakati, ndinofunga maziso ake akatenderera saShih Tzus anofanirwa kuve. Muviri wake murefu uye makumbo mapfupi hunhu hwaShih Tzu, nepo bhachi rake pfupi, nzeve mativi uye muromo wakareba zvinobva kudivi reRat Terrier. Nekudaro, kune mamwe mavara (tsoka dzake uye muswe) uko mamwe evhudzi akareba kupfuura mamwe.
'Simba raJuju, kwandiri, rakanaka. Anoda enda kunofamba kana kumhanya uchitenderera kunze, asi zvakare unofarira kugumbatira uye kurara mukati. Ini ndingati maitiro ake ekurovedza muviri akaderera pane avhareji, kwete nekuda kwekuti ari mudiki, asi nekuti anogona kuita zvakawanda zvekumhanya achitenderera mukati. Iye anoshuvira kutariswa uye ndinotenda zvizere kuti, dai akadzidziswa, kwaisazove nemagumo kuzvinhu zvaaizoita kufadza vanhu vake. Akazvipira kwazvo. '
'Iye, sembwa zhinji, angave ari nguruve kana akabvumidzwa. Nekudaro, haasi mupemhi uye anowanzo gara akanyarara kana kuenda kunorara pasi chikafu chiri patafura. Anohukura kupfuura zvandinoda ini. Kana achifarira kundiona mangwanani, zvinowanzova kungorira (kurira) kamwe chete, asi kana paine chinhu chiri kuitika kunze kana vanhu vasvika, kupenga (asi isu tine dzimwe imbwa dzinogona kunge dziri dzinonyanya kuhukura.) Anotya zvishoma nzvimbo nyowani, saka gara padhuze neni. Anoda vanhu vatsva asi anonyanya kungwarira vana nembwa hombe. Haana kumbobvira arumwa mumamiriro ezvinhu aya! Iye anonanzva hombe, izvo vamwe vanhu vanofarira uye vamwe havadaro. Nzeve dzake dzinonakidza kutaura uye ndiye (kana ndingadaro) ane moyo murefu uye fotogenic!
'Matambudziko ehutano chete ekucherechedza anga ari maziso eucherry, kurwara kwakapfava, uye chokwadi chekuti zvimwe zvigunwe zvake zvakamonana zvisingaite uye zvinofanirwa kutemwa kazhinji kudzivirira kusagadzikana kana kukuvara pamapedhi ake.'
Spinda iyo Ratshi Terrier pamwedzi gumi neimwe (Rat Terrier / Shih Tzu musanganiswa) - 'Ndiye imbwa yakadzikama, ine rudo ine hunhu hwakanakisa.'
Spinda iyo Ratshi Terrier pamwedzi gumi nembiri (Rat Terrier / Shih Tzu sanganisa rudzi rwembwa)
Ratshi Terrier Mifananidzo 1
Chinyorwa cheRat Terrier Sanganisa Inobereka Imbwa
Chinyorwa cheShih Tzu Sanganisa Mhando Dzembwa
chihuahua chinese crested mix for sale
runyorwa rwembwa dzinobereka alfabheti
corgi uye jack russell musanganiswa
manyoro maple akapetwa akaputirwa anotora
airedale terrier goridhe retriever musanganiswa
basset hound goridhe retriever sanganisa mifananidzo
boston terrier english bulldog musanganiswa